Tag Archive for "कञ्चनपुर" - सबैतिर रोपाइँको चटारो, आकाशे पानीको भर पर्दा किसान निराश !
सबैतिर रोपाइँको चटारो, आकाशे पानीको भर पर्दा किसान निराश !
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुर वेदकोट नगरपालिका–२ का किसान हरिदत्त जोशी आकाशमा बादल छाउनासाथ हलगोरु लिएर खेतमा जान्छन् । सबैतिर रोपाइँको चटारो भइरहेका बेला आकाश हेरेर बसेका जोशी वर्षा नहुँदा खेत बाझै रहन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । “आकाशमा बादल देखेर खुशी हुँदै खेतसम्म पुग्दा घाम लागेपछि निराश भएर फर्किनु उनको दिनचर्या भएको छ”, जोशी भन्छन्, “वर्षात् नहुँदा बेर्ना पनि सुक्न थालिसक्यो ।” असार महिना सकिन ... थप पढ्नुहोस्
कञ्चनपुर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र बतासे झरना क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण शुरु गरिएको छ । झर्ना पुग्ने ठाउँमा पुग्ने पैदलयात्रुको आवागमनलाई सहज बनाउन ढुङ्गाको सिँढी बनाउने र बाटोमा रहेका ढुङ्गालाई पन्छाई व्यवस्थित पार्न २४ जनाले काम पाएका छन् । चुरे पर्वत शृङ्खलामा रहेको बतासे झरना आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्यका रुपमा रहेको छ ... थप पढ्नुहोस्
न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले कैलाली र कञ्चनपुरमा भीषण हावाहुरी [फोटोफिचर]
काठमाडौं । पश्चिममा विकास भएको न्यून चापीय प्रणली र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा तथा स्थानीय वायुको संयुक्त प्रभावले बिहीबार बेलुका कैलाली र कञ्चनपुरमा भीषण हावाहुरी आएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बिहीबार साँझ कैलाली र कञ्चनपुरमा विकसित भएको प्रणाली बिस्तारै सर्दै आज बिहान काठमाडौँसम्म आइपुगी हावाहुरीसहित वर्षा भएको महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् मौसमविद् बरुण पौडेलले ब... थप पढ्नुहोस्
कैलाली र कञ्चनपुर हावाहुरीबाट पीडितको राहत र उद्धारमा जुट्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कैलाली र कञ्चनपुर हावाहुरीबाट पीडितको राहत र उद्धारमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्तिमार्फत बिहीबार साँझ कैलाली र कञ्चनपुरमा आएको हावाहुरीका पीडितको राहत र उद्धारमा नेता तथा कार्यकर्तालाई जुट्न आग्रह गरेका हुन् । हावाहुरीका कारण दुई जनाको मृत्यु र एक सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते, अङ्गभङ्... थप पढ्नुहोस्
कैलालीमा हावाहुरीबाट दुईको मृत्यु, एक सयभन्दा बढी मानिस घाइते !
धनगढी । भीषण हावाहुरीले कैलाली र कञ्चनपुरमा दुईको मृत्यु हुनुका साथै ठुलो क्षति भएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण नआए पनि उक्त हावाहुरीमा परेर एक सयभन्दा बढी मानिस घाइते भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ मा हावाहुरीको समयमा टिपरसँग से२१प ५८२१ नंको मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँका वीरबहादुर चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जएको छ । त्यसैगरी टिकापुर नगरपालिका... थप पढ्नुहोस्
कञ्चनपुरमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमितहरुको मृत्युदर घट्दै !
भीमदत्तनगर । औषधिको नियमित प्रयोग र रोगप्रतिको सचेतनाका कारण कञ्चनपुरमा एचआइभी एड्स सङ्क्रमितहरुको मृत्युदर घट्दै गइरहेको छ । कञ्चनपुरमा २०६३ सालयता १२० जना एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । महाकाली अञ्चल अस्पतालको ‘एआरटी’ शाखामा हालसम्म महिला, पुरुष र बालबालिका गरी ५०९ सङ्क्रमितहरु सम्र्पकमा आएको अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ । “औषधिको नयाँ नयाँ आविष्कार, सङ्क्रमितहरुको नियमित औषधि सेवन र स्याहा... थप पढ्नुहोस्
कञ्चनपुरमा चालकले बिच सडकमै महिलामाथि कुटपिट गरेपछि [भिडियोसहित]
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा एकजना सवारी चालकले बिच सडकमै महिलामाथि दुव्र्यवहार गर्दै कुटपिट गरेका छन्। आज दिउँसो जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरको ट्राफिक चोकमा से १ ज १०९४ नम्बरको उईङगर गाडीका चालक गोकुल बोहोराले सडकमै महिलामाथि कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी नीरिक्षक मोहनजंग बुढाथापाले चालक बोहोराले भाडाको विषयमा भएको विवादका क्रममा अपशब्द प्रयोग गरी दुव्र्यवहार ... थप पढ्नुहोस्
कञ्चनपुर । बेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुरको मुक्त कमैया शिविरमा पानीको हाहाकार भएको छ । बिहीबार बेलुकी बस्तीमा रहेको धारामा पानीमा लाइन बसेकी अनिता विकलाई हरेक दिन पानीका लागि लाइन बस्नु बाध्यता बनेको छ । “गर्मीयामका तीन महीना त प्यास मेटाउनै मुश्किल पर्छ”, धरमपुरकी विकले भनिन् , “मुक्तभएपछि यहाँ पानीको समस्या हरेक वर्ष झेल्नुपरेको छ ।” फागुनदेखि असार महीनामा आकाशबाट पानी नपरुञ्जेलसम्म बस्तीमा पानी... थप पढ्नुहोस्
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका– २ वाणिमा शुक्रबार करेन्ट लागेर छ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । टेबुल पङ्खामा जोडिएको तार छुटेर करेन्ट प्रवाह हँुदा नरेश भुलकी छोरी कमला भुलको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले बताए । करेन्टले झड्का दिँदा सोही घरका ५५ वर्षीय देबुवा भुल सामान्य घाइते भएका छन् । मृतक बालिकाको शव परीक्षणका लागि महाकाली अञ्चल अस्पत... थप पढ्नुहोस्
निर्मला हत्या प्रकरण : अछामबाट शंकास्पद दुईजना पक्राउ
अछाम । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा विभिन्न पाटोबाट अनुसन्धान जारी राखेको नेपाल प्रहरीले अछामबाट शंकास्पद दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिबारे प्रहरीले केही खुलाएको छैन । कञ्चनपुरमै रहेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो 'सीआईबी'को टोलीले निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा अछामबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च... थप पढ्नुहोस्